Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Luke 12
Nepali New Revised Version, Luke 12
1 यसै बीच जब हजारौँको भीड जम्‍मा भयो, यहाँसम्‍म कि एउटाले अर्कालाई कुल्‍चन लाग्‍यो, उहाँले पहिले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍न लाग्‍नुभयो,  “तिमीहरू फरिसीहरूको खमिरदेखि होशियार बस। त्‍यो खमिर तिनीहरूको कपट आचरण हो।
2  छोपिएको यस्‍तो कुनै कुरा छैन, जो प्रकट हुनेछैन, र छिपेको कुनै कुरा छैन, जो थाहा लाग्‍नेछैन।
3  यसकारण जे तिमीहरूले अँध्‍यारोमा भनेका छौ, त्‍यो उज्‍यालोमा सुनिनेछ। गुप्‍त कोठामा भनेका कुरा घरको धुरीबाट प्रचार हुनेछ।
4  “मेरा मित्र हो, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिनीहरूदेखि नडराओ जसले शरीरलाई मार्दछन्‌, तर त्‍यसपछि अरू केही गर्न सक्‍दैनन्‌।
5  तर कोदेखि डराउनुपर्छ, म तिमीहरूलाई चेताउनी दिनेछु: तिनैसँग डराउनुपर्दछ जससँग शरीरलाई मारेपछि नरकमा फालिदिने शक्ति छ। म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिनीदेखि नै डराओ।
6  के दुई पैसामा पाँच वटा भँगेरा बिक्‍दैनन्‌? तीमध्‍ये एउटालाई पनि परमेश्‍वरले बिर्सनुहुन्‍न।
7  तर तिमीहरूका त शिरका केशसमेत गनिएका छन्‌। यसकारण नडराओ, तिमीहरू धेरै भँगेराभन्‍दा बढ़ी मोलका छौ।
8  “म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, हरेक जसले मलाई मानिसहरूका सामुन्‍ने स्‍वीकार गर्दछ, त्‍यसलाई मानिसको पुत्रले पनि परमेश्‍वरका दूतहरूका सामुन्‍ने स्‍वीकार गर्नेछ।
9  तर जसले मलाई मानिसहरूका सामुन्‍ने अस्‍वीकार गर्दछ, परमेश्‍वरका दूतहरूका सामुन्‍ने त्‍यो पनि अस्‍वीकृत हुनेछ।
10  हरेक जसले मानिसको पुत्रको विरुद्धमा बोल्‍छ, त्‍यसलाई क्षमा हुनेछ, तर जसले पवित्र आत्‍माको विरुद्धमा निन्‍दा गर्दछ, त्‍यसलाई क्षमा हुनेछैन।
11  “जब तिनीहरूले तिमीहरूलाई सभाघरहरू, शासकहरू र अधिकारीहरूका सामु ल्‍याउँछन्‌, तब तिमीहरूले कसरी र के जवाफ दिने, अथवा के भन्‍नुपर्ने, सो फिक्री नगर,
12  किनभने त्‍यसै बेला तिमीहरूले के भन्‍नुपर्ने हो पवित्र आत्‍माले तिमीहरूलाई सिकाउनुहुनेछ।”
13 भीड़बाट एक जनाले उहाँलाई भन्‍यो, “गुरु, मेरा दाज्‍यूलाई भनिदिनुहोस्‌, र तिनले अंशबन्‍डा गरिदेऊन्‌।”
14 तर उहाँले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो,  “मित्र, कसले मलाई तिमीहरूमाथि न्‍याय गर्ने अथवा तिमीहरूको सम्‍पत्ति बाँड़िदिने तुल्‍यायो?”
15 उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो,  “होशियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्‍दगी उसको धन-सम्‍पत्तिको प्रशस्‍ततामा रहँदैन।”
16 उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्‍टान्‍त भन्‍नुभयो,  “कुनै एक जना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्‍त उब्‍जनी भयो।
17  त्‍यसले मनमनै गुन्‍न लाग्‍यो, ‘मेरो अन्‍न राख्‍ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरूँ?’
18  तब त्‍यसले भन्‍यो, ‘म यसो गर्नेछु– आफ्‍ना ढुकुटीहरू भत्‍काएर झन्‌ ठूला-ठूला बनाउनेछु, र मेरा सबै अनाज र मालसामान त्‍यहीँ राख्‍नेछु।
19  अनि म आफ्‍नो प्राणलाई भन्‍नेछु, “ए प्राण, धेरै वर्षसम्‍म पुग्‍ने प्रशस्‍त सम्‍पत्ति तेरो निम्‍ति थुप्रिएको छ। सुख-चैनमा बस्‌। खा, पि, र मोज गर्‌”।’
20  “तर परमेश्‍वरले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, ‘ए मूर्ख, आज राती नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ, र जे कुराहरू तैंले आफ्‍नो निम्‍ति थुपारेको छस्‌, ती कसको हुने?’
21  “आफ्‍नो निम्‍ति धन-सम्‍पत्ति थुपार्ने, तर परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा धनी नहुने मान्‍छेको अवस्‍था यस्‍तै हुन्‍छ।”
22 उहाँले आफ्‍ना चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो,  “यसैकारण म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, आफ्‍नो प्राणको निम्‍ति के खाऔं र शरीरको निम्‍ति के पहिरौं भनी चिन्‍तित नहोओ।
23  किनकि प्राण भोजनभन्‍दा र शरीर वस्‍त्रभन्‍दा ठूलो हो।
24  कागहरूलाई विचार गर: तिनीहरू न त छर्दछन्‌, न कटनी गर्दछन्‌, तिनीहरूको न त भण्‍डार न ढुकुटी नै छ, तर पनि परमेश्‍वरले तिनलाई खुवाउनुहुन्‍छ। तिमीहरू चराचुरुङ्गीभन्‍दा ज्‍यादै बढ़ी मोलका छौ!
25  तिमीहरूमध्‍ये कसले फिक्री गरेर आफ्‍नो आयुमा एक घड़ीसम्‍म पनि थप्‍न सक्‍छ?
26  यसकारण तिमीहरू त्‍यतिको सानो काम पनि गर्न सक्‍दैनौ भने, अरू कुराको चिन्‍ता किन गर्दछौ?
27  “लिली फूललाई विचार गर, कसरी तिनीहरू न त परिश्रम गर्छन्‌ न कात्छन्‌, तर म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्‍नो सारा गौरवमा यीमध्‍ये एउटा जतिको पनि विभूषित थिएनन्‌।
28  तर आज हुने र भोलि आगोमा फालिने मैदानको घाँसलाई परमेश्‍वरले यसरी आभूषित गर्नुहुन्‍छ भने, ए अल्‍पविश्‍वासी हो, उहाँले तिमीहरूलाई झन्‌ कति बढ़ी आभूषित गर्नुहुनेछ।
29  के खाऔंला कि के पिऔंला भनी तिमीहरू खोजीमा नबस, र चिन्‍तित पनि नहोओ।
30  किनकि संसारका सबै मानिसहरू यी कुराहरूको खोजीमा रहन्‍छन्‌। तिमीहरूका पिताले जान्‍नुहुन्‍छ कि तिमीहरूलाई यी कुराहरूको खाँचो छ।
31  तर परमेश्‍वरका राज्‍यको खोजी गर, र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई दिइनेछन्‌।
32  “सानो बगाल, नडराओ! किनभने तिमीहरूलाई राज्‍य दिन तिमीहरूका पिता प्रसन्‍न हुनुहुन्‍छ।
33  तिमीहरूको सम्‍पत्ति बेचेर दान देओ। आफ्‍नो निम्‍ति थोत्रो नहुने थैलीहरू बनाओ। स्‍वर्गमा कहिल्‍यै नष्‍ट नहुने धन स्‍वर्गमा सञ्‍चय गर। त्‍यहाँ चोर आउँदैन र कीरा पनि लाग्‍दैन।
34  किनकि जहाँ तिम्रो धन छ, त्‍यहीँ तिम्रो मन पनि हुनेछ।
35  “तिमीहरूका आफ्‍ना कम्‍मर कस र तिमीहरूका बत्ती बालिराख।
36  तिमीहरू ती मानिसहरू जस्‍ता होओ, जसले आफ्‍ना मालिक विवाहको भोजबाट फर्किआएर ढकढक्‍याउँदा तिनको निम्‍ति झट्टै ढोका खोलिदिन्‍छन्‌।
37  ती नोकरहरू धन्‍यका हुन्‌, जसका मालिक घर आउँदा तिनीहरूलाई जागिरहेका भेट्टाउनेछन्‌। साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिनले आफ्‍नो पटुका कसेर तिनीहरूलाई खान बसाउनेछन्‌, र आएर तिनीहरूको सेवा गर्नेछन्‌।
38  यदि तिनी मध्‍यरात वा त्‍यसभन्‍दा अझ ढिलो आउँदा पनि नोकरहरूलाई जागै भेट्टाए भने, तिनीहरू धन्‍यका हुन्‌।
39  तर यो जान, कि चोर कुन बेला आउँछ भनेर घरका मालिकले जानेका भए तिनी जागा बस्‍नेथिए, र चोरलाई घर फोरेर पस्‍न दिनेथिएनन्‌।
40  तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि तिमीहरूले नचिताएको बेलामा मानिसको पुत्र आउनेछ।”
41 तब पत्रुसले भने, “हे प्रभु, के यो दृष्‍टान्‍त हाम्रै निम्‍ति मात्र बताउनुभएको हो, कि अरू सबैका निम्‍ति?”
42 प्रभुले भन्‍नुभयो,  “त्‍यो विश्‍वासी र बुद्धिमानी भण्‍डारे को हो, जसलाई त्‍यसका मालिकले आफ्‍ना परिवारलाई निश्‍चित समयमा तिनीहरूका भागमा पर्ने भोजन दिनलाई खटाउनेछन्‌?
43  त्‍यो दास धन्‍यको हो, जसलाई त्‍यसका मालिक आउँदा त्‍यसै गरिरहेको भेट्टाउनेछन्‌।
44  साँच्‍चै म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिनले त्‍यसलाई आफ्‍ना सारा सम्‍पत्तिमाथि अधिकार दिनेछन्‌।
45  तर त्‍यस दासले आफ्‍नो मनमा “मेरा मालिक आउन ढिलाउनुहुनेछ” भनेर कमारा र कमारीहरूलाई पिट्‌न लाग्‍यो, र त्‍यो खान, पिउन र मात्‍न लाग्‍यो भने,
46  त्‍यसले आशा नगरेको दिन र नचिताएको घड़ीमा त्‍यसका मालिक आउनेछन्‌, र त्‍यसलाई दण्‍ड दिनेछन्‌, र त्‍यसको दशा अविश्‍वासीहरूको जस्‍तो हुनेछ।
47  “आफ्‍नो मालिकको इच्‍छा जानेर तयार नरहने र तिनको इच्‍छाबमोजिम नगर्ने दासले चाहिँ ज्‍यादै पिटाइ खानेछ।
48  तर मालिकको इच्‍छा नजानेर पिटाइ खाने योग्‍यको काम गर्नेले थोरै पिटाइ खानेछ। प्रत्‍येक जसलाई धेरै दिइएको छ, त्‍यसबाट धेरै मागिनेछ, र हरेक जसलाई धेरै सुम्‍पिएको छ, त्‍यसबाट अझ बढ़ी लिइनेछ।
49  “म पृथ्‍वीमाथि आगो खन्‍याउन आएको हुँ, त्‍यो त बरु अघिबाटै सल्‍किसकेको भए हुनेथियो!
50  एउटा बप्‍तिस्‍मा छ, जो मैले लिनुपर्नेछ। त्‍यो पूरा नहोउञ्‍जेल म अति व्‍याकुल छु!
51  के तिमीहरू सम्‍झन्‍छौ कि म पृथ्‍वीमा शान्‍ति ल्‍याउन आएँ? होइन, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, बरु म विभाजन ल्‍याउन आएँ।
52  किनभने अब उसो एक परिवारमा पाँच जना एक-अर्कामा विभाजित हुनेछन्‌, तीन जनाका विरुद्धमा दुई, र दुई जनाका विरुद्धमा तीन।
53  तिनीहरूमा विभाजन हुनेछ– बाबुको विरुद्धमा छोरा, र छोराको विरुद्धमा बुबा, आमा छोरीको विरुद्धमा र छोरी आमाको विरुद्धमा, सासू आफ्‍नी बुहारीको विरुद्धमा, र बुहारी त्‍यसकी सासूको विरुद्धमा।”
54 उहाँले भीड़लाई पनि भन्‍नुभयो,  “तिमीहरू पश्‍चिमतिर बादल उठ्‌दैगरेको देखेर झट्टै भन्‍दछौ, ‘पानी पर्ने रहेछ,’ र त्‍यसै हुन्‍छ।
55  जब दक्षिणी बतास चल्‍छ तब तिमीहरू भन्‍छौ, ‘गर्मी हुनेछ’, र त्‍यसै हुन्‍छ।
56  ए कपटी हो! तिमीहरू आकाश र पृथ्‍वीका लक्षणहरू बताइदिन सक्‍छौ, तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन किन जान्‍दैनौ?
57  “कुन कुरा ठीक हो भनेर तिमीहरू आफै किन निर्णय गर्दैनौ?
58  तिमीहरूको उजूरवालासँग हाकिमकहाँ जाँदा, बाटैमा त्‍यससँग मिलाप गर, नत्रता त्‍यसले तिमीलाई न्‍यायाधीशकहाँ तानेर लैजानेछ, र न्‍यायाधीशले तिमीलाई अफिसरको हातमा जिम्‍मा दिनेछ, र अफिसरले तिमीलाई झ्‍यालखानमा हालिदिनेछ।
59  म तिमीलाई भन्‍दछु, तिमीले एक-एक पैसा नतिरुञ्‍जेल त्‍यहाँबाट छुट्‌नेछैनौ।”
Luke 11 Choose Book & Chapter Luke 13